DAAWO:Soo dhoweyntii Qalbi Dhagax oo ruxday JigJiga & Kulan uu la qaatay… – Puntlandtimes
DAAWO:Soo dhoweyntii Qalbi Dhagax oo ruxday JigJiga & Kulan uu la qaatay…
JIGJIGA(P-TIMES)- Magalada Jigjiga ee xarunta dowladd deegaanka waxaa maanta lagu soo dhaweeyay Cabdi Kariin Muuse Qalbi-Dhagax oo kamid ah saraakiisha ururka ONLF.
Qalbi-Dhagax ayaa hore dowladda Soomaaliya ugu dhiibtay Itoobiya, hayeeshee uu cafis u fidiyay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed sidaasina lagu soo daayay.
Magalada Jigjiga ayaa maanta siweyn loogu soo dhaweeyay Qalbi-Dhagax, waxaana soo dhoweyntiisa ka qeyb qaatay madxda ONLF ee JigJiga ku sugan iyo taageerayaashooda.
Suugaan ayaa lagu soo dhaweeyay Qalbi-Dhagax oo aan weli tegin Jig jiga tan iyo markii laga soo daayay xabsi uu ku jiray oo ku yaala magalada Adis Ababa.
Cabdi Kariin Muuse Qalbi-Dhagax ayaa dhawaan waxa uu soom maray gobolo badan oo dalka Soomaaliya ah sida deegaanada Jubbaland, Galmudug, Puntland, Somaliland iyo qaybo badan oo kamid ah dalka Soomaaliya.
Warsame Cumar Mahad says:
Qaainul-wadan/Traitor(Khayre) dhinac walbo waa laga guuleystay.
AL SHABAAB vs “dowlada” (nabar iyo naxdin) waxa guusha raacday AL SHABAAB oo maalin walbo dilahaysa askarta, sarakiisha, masuuliyiinta kooxda nabar iyo naxdin ay dadka qaarkiis ugu yeeraan “dowlada”.
PUNTLAND vs Kooxda Nabar iyo Naxdin waxa guusha raacday PUNTLAND. Kooxda Nabar iyo Naxdin marka burbursheen Galmudug ayaa is yiraahdeen Puntland si la mid ah uu burbursha ayago adeegsanahaya jajuusin Puntland uu dhashay sida Camay iyo musharaxiinta qaarkiis. Laakin Puntland 20 sano jidhay waa taqaano sida la iska celsho hogaamiye kooxedyada Muqdisho sida Farmaajo/khayre.
QALBIDHAGAX vs Kooxda Nabar iyo Naxdin waxa guusha raacday QALBIDHAX. Kooxda Nabar iyo Naxdin waxa uu dhiibeen itoobiyo Qalbidhagax ayago filahayay in si degdeg ah itoobiyo uu disho laakin Soomali dhan ayaa carooday saa Soomaali waa ka badbaadsheen Qalbidhagax dilka lagu fulin laha. Qaainul-Wadan Farmaajo iyo Qaainul-Wadan Khayre si ay uu qarshaan fashilka qorshahooda ayaa ay fuliyeen Qaraxa ZOOBE si ay soomalida carraysan meel kale uu jeedsho. “Dowlad” dadkiis laynahaysa Farmaajo iyo Khayre ugu imow.
Madaxweyne Farmaajo iyo Raisulwasaare Khayre ayaga amarkooda ka soconaya Garowe ka dib Jan 8, 2019. Ama caytan ama cabaad wax maamul goboleed la yiraahdo ma jirto waa sheeko dhamaatay. Musharaxa aan anaga wadano ayaa la wareegaya xukunka Garowe.
Minneapolis Finest says:
Fuck you motherfucker and fuck Farmaajo and Khayre too bitch.
Salebaan Cali Khalaf says:
Farmaajo iyo Khayre qaraxyada iyo qaraajinta ka dhacaysa Muqdisho ha ka hadleen.
Puntland talo iyo amar ma ka qaadanahayso dad Villo Somalia ku jiro ayado hoobiye ku dhacahayo Villo Somalia. Dhinac walba Villo Somalia agtiis qarax iyo qaraajin ayaa ka socdo. Farmaajo iyo Khayre ha nabadeeyeen Muqdisho hana ka haraa n farogelinta iyo burburka Puntland ay raadinahayaan.